Sheekha Xaaful-Quraanka Ee U Dhashay Dalka Tanzania Oo Ducooyin Ka Jeediyay Madaxtooyadda Somaliland – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa(ANN)Madaxweyne ku xigeenka Somaliland C/raxmaan Cabdullaahi Ismaaciil, isla markaana ah ku simaha Madaxweynaha ayaa maanta qasriga Madaxtooyadda ku qaabiley wefti uu hoggaaminayay Sheekha Shariif Makididi oo caan ka ah dunida islaamka, isla markaana ah Caallin dhalinyaro
ah. Kadib markii uu maanta socdaal ku yimi Somaliland.
Wasiirku wuxuu sheegay in muxaadirooyinka sheekhan dhalinyarada ah ay ku islaameen dad lagu qadaray sideetan kun iyo lix boqol oo qof oo ku dhaqan wadamo kala duwan oo adduunka ah. Sheekh Khaliil waxa uu intaasi ku daray in sheikh Shariif Makididi uu hadlay isagoo sagaal bilood oo qudha jiray, taasina ay noqotay mucjiso aad u weyn oo uu Ilaahay ku galaday.
Dhinaca kale Sheekh Shariif Makididi oo kulankaa ka hadlay ayaa cullimada, wasiirka diinta iyo awqaafta iyo madaxweyne Ku xigeenka Somaliland uga mahad celiyay sida diiran ee ay u qaabileen, waxaanu tilmaamay in Somaliland tahay dalkii 11-aad ee uu muxaadirooyin iyo dacwada faafinta islaamka uu ku tago. Waxa uu sheegay inuu muxaadirooyin u jeedin doono dadweynaha ku dhaqan magaaladda Hargeysa maalinta khamiista ee fooda inagu soo haysa.
Madaxweyne xigeenka Somaliland C/raxmaan Cabdullaahi Ismaaciil (Saylici), isla markaana ah ku simaha Madaxweynaha. ayaa u mahad celiyay Sh. Shariif Makididi, waxaanu tilmaamay inuu shacbiga iyo xukuumadda ka heli doono soo dhawayn wanaagsan, isagoo yidhi, “Waxaan u rajaynayaa mudada aad joogtid Somaliland inaad khayr ku dhamaysatid socdaalkaaga shacbiga Somaliland-na diyaar ayay idiin yihiin inay muxaadirooyinkiina. Dawladduna waxay diyaar u tahay inay ilaaliso amnigiina,”ayuu yidhi Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland.
Sheekh Shariif Makididi, ayaa kulankaa Madaxtooyadda kasoo jeediyay duco aad u dheer oo uu Somaliland iyo bulshada ku dhaqan ugu duceeyay khayr, isla markaana uu Illaahay uga baryay inuu sii adkeeyo nabad-gelyadooda.
Sh. Shariif oo ah wiil mucjiso ah oo u dhashay dalka Tanzania, isla markaana ah xaafudul Quraan mujicso ku noqday dunidda islaamka. Kadib markii uu hadlay isagoo sagaal bilood jiray, wuxuu meelo badan oo dunida ka mid ah ka soo jeediyay muxaadirooyin Diini ah. Waxaana maanta is heer sare ah loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa, isagoo mudo toban maalmood ah joogi doona Somaliland.